Ovao ny kisary amin'ny lahatahiry OS X | Vaovao IPhone
Pablo Aparicio | | Apple products
Ny fanovana ny sary masina ao amin'ny Mac OS X dia asa tena tsotra nefa, toy ny amin'ny zava-drehetra amin'ny fiainana dia tsy maintsy fantatrao ny làlana. OS X dia rafitra iray izay manambatra fahombiazana azo antoka miaraka amin'ny tontolo tena hita maso sy manintona, saingy imbetsaka aho no nandre fitarainana avy amin'ny olona mbola maniry ny hanamboatra zavatra bebe kokoa momba ny rafitra, indrindra ireo sary famantarana ny lahatahiry. Amin'ity lesona tsotra ity dia hampianariko ianao ny fomba fanovana tsy ny kisary amin'ny lahatahiry ihany, raha tsy ny sary masina tianao rehetra (Afa-tsy ireo sary famantarana ny rafitra manan-danja, toy ny Finder).
Ny zavatra voalohany tokony ho fantatrao dia ny manova ny sary masina dia mila manana ny sary amin'ny endrika manokana isika. Ity endrika ity dia manana ny extension ".icns". Mila mpanova isika, araka izay azo atao Easy Bake Icon. Mba hanamorana ny zava-drehetra dia ireto ny dingana.
Ny dingana voalohany dia mifidy sary. Ny torohevitro dia hoe, mba hahitana izay tsara indrindra araka izay azo atao, dia misafidy .png tsy misy ambadika na hanitsy ilay sary izahay mba hananana ilay kisary ihany. Amin'izany fomba izany no hahatratrarantsika fa ny sary masina dia manana endrika izay tiantsika ary tsy manana kianja isika.
Raha vantany vao manana ny sary irina isika, manokatra ny Easy Bake Icon izahay. Hiseho ny boaty fifampiresahana izay tsy hiasantsika fotsiny karohy ary safidio ny sary fa efa nomaninay ary atoro anay hoe aiza no hamonjy ilay sary.
Amin'ny dingana manaraka dia tsy maintsy ataontsika mifidy fampirimana / fampiharana izay tiantsika hanova ny kisary ary hanery cmd + i (na tsindrio havanana ary "mahazoa vaovao"). Ity dia hampiseho antsika varavarankely miaraka amin'ny vaovao rehetra. Ny mahaliana antsika dia ny kisary havia ambony, izay ho sary famantarana ny fampirimana na ny sary famantarana ny fampiharana izay tiantsika hovana.
Farany dia manana ihany isika tariho ny sary izay noforonintsika tamin'ny dingana 2 ambonin'ilay sary famantarana tianay hosoloina izay, araka ny nolazaiko tetsy ambony, dia eo amin'ny ankavia ambony.
Ho fanampin'izay, asio ihany koa ny hevitra fa ny dingana farany dia azo atao mampiasa ny fampiharana toy ny sary. Ny fampiharana ao amin'ny OS X dia efa manana sary ao anaty format .icns eo amin'ny kisary misy azy ireo, mba hahafahantsika misintona ny kisary fampiharana eo ambonin'ny folder. Mety ho mora ampiasaina izy ity, ohatra, ao amin'ny fampirimana "documents", izay amoronana folder misy ny sasany.
Amin'ireto dingana tsotra ireto dia afaka manana folder toa ilay eo an-tampon'ity lahatsoratra ity isika na hanova ny sarin'ireo rindranasa tadiavintsika mihitsy aza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Ovay ny kisary fampirimana OS X
POST tsara fa amin'ny forum iPhone dia ny kely na kely fotsiny dia tsy mahavoa izany.
Raha ny marina dia azon'izy ireo atao izany amin'ny karazana sary, na JPG, RPG, sns ... tsy ilaina ny fiovam-po. Ankoatr'izay, ankoatry ny fisintomana azy dia azonao apetaka amin'ny Copy-Paste. Zavatra efa tao amin'ny Mac hatrizay.
Etsy ankilany, azonao atao ny manova ny lokon'ny fampirimana, mba tsy hananana foana folder BLUE mankaleo, izay azonao atao amin'ny alàlan'ny fandikana ny kisary folder ary apetaho amin'ny rindrambaiko PREVIEW ary eo ianao dia afaka manova ny loko ... Hatramin'ny nanaovanao dia naka tahaka an'io sary io ianao ary apetakao amin'ny fampiharana araky ny nohazavainao teo aloha.
iphonemac dia hoy izy:
Saika nanompo ahy ilay lahatsoratra satria hatramin'ny nivoahako ho Yosemite dia nanjary sarotra kokoa tamiko ny nanamboatra ireo kisary fampirimana. Indrindra raha alias izy ireo dia tsy mandeha mihitsy. Misaotra ny tutorial ihany.
Mamaly an'i iphonemac